Waa maxay xarunta goobta gabboodku? - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Waa maxay xarunta goobta gabboodku?
Xarumaha gaboodka dhibta waxay halkaas ugu diyaaryihiin kuwan la gaadhsiiyay dagaalka ama weerar kaga yimid lamaanaha, xubin qoyska ah ama qof kale oo iyaga u dhow. Uma baahnid inaad la kullanto dhibaato aad u darran si aad u hesho caawimaad goobta gaboodka dhibta. Goobta gabboodka waxay bixisaa badbaado, talo iyo la talinta haweenka, raga iyo carruurta.
Gaboodka dhibtu waxay bixiyaan meel amaan ah oo lagu noolaada muddo xadidan, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan adeeg la siiyo kuwaas oo aan u baahnayn inay halkaas ku noolaadaan. Waa bilaash in la helo caawimo iyo nolol xaga goobta gabboodka dhibta. Waxaad toos u booqan kartaa goobta gabboodka,addoon lahayn ballan ama gudbin.
Dhammaan xarumaha masiibada (hooy-yada) ayaa amaan ah in la isticmaalo. Waxay dhammaantood qaadeen talaabooyin looga hortagaayo faafida COVID-19.
Caawimada si loo sameeyo xidhiidhka nidaamka taageerada
Macluumaadka ku saabsan xuquuqaha iyo suuragal ahaanshaha
Hagitaanka ( ay ku jirto talada sharciga ah)
kooxaha la talinta iyo hawlaha
Waxaad sidoo kale waci kartaa xarunta gaboodka dhibta si aad u hesho talo. Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga marka aad la xidhiidho xarunta gaboodka. Intaa waxa dheer, qaraabada dadka dhibtu gaadhay, nidaamka taageerada dad waynaha, dugsiyada iwm, waxay la xidhiidhi karaan xarunta gaboodka dhibta si ay u helaan macluumaadka ku saabsan ee caawimada la heli karo ama jawaabaha su’aalaha.
Xarumaha gaboodka dhibta waxay sidoo kale siiyaan adeeg dadka aan u baahnayn inay halkaas ku noolaadaa
SIDAN AYAA LAGUUGU QAABILAYAA XARUNTA DHIBANAYAASHA:
Shaqaalaha xarumaha gaboodka dhibta waxay leeyihiin tababar khuseeya iyo/ama khibrada ka shaqaynta dagaalka ama weerarka. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Isticmaalayaasha kale ee xarunta gaboodka looma oggola inay kala hadlaan wax ku saabsan xaaladaada kuwa kale. Xarumaha gaboodka dhibtu waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Degma kasta waxaa looga baahanyahay inay bixiso adeega xarunta gaboodka dhibta. Had iyo jeer waa xaalada in dowlado hoose oo badan ay ka wada shaqeeyaan xarunta gaboodka dhibta. Badanka xarumaha gaboodka dhibta waxaa loogu talo galay inay siiyaan isticmaalayaasha waxa loo baahanyahay iyaddoo leh dhaqaaq la yareeyay, oo dowladda hoose waa inay aqoonsataa xalalka beddelka haddii wax siintan aanay jirin.
Xafiiska Dhaqdhaqaaqa Xarunta Gaboodka waa urur xubin ka ah xarumaha gaboodka dhibta oo waxa uu sidoo kale ka masuulyahay maamulida ROSA, taas oo la shaqaysa dhibanayaasha ka ganacsiga dadka ee loo isticmaalo ujeedooyinka dhilaysiga. Waxaadka akhriyi kartaa wax badan oo ku saabsan Xafiiska Dhaqdhaqaaqa Xarunta Gaboodka shaqadeeda websaydkeeda.
Liiska dhammaan xarumaha gaboodka dhibta Norway
Websaydka Xafiiska Dhaqdhaqaada Gaboodka (Keliya Af Noorwayjiyaan)